Ny fototry ny fifandraisana amin’ny hafa ny fifandraisana dia fifandraisana — ny olombelona, mila ho toy ny ara-tsosialy, ny maha-manan-tsaina, toy ny mpitondra ny fahatsiarovan-tena.
Amin’ny»psychology», misy lafiny manan-danja ny fifandraisana: ny afa-po, ny tanjona sy ny fitaovana.
Ny afa-po ny fifandraisana vaovao fa nandritra ny fifandraisana dia lany avy velona zavatra hafa. Ny afa-po ny fifandraisana dia be kokoa noho ny ao amin’ny biby. Ny olona fifanakalozana amin’ny tsirairay vaovao misolo tena ny fahalalana momba ny tontolo izao, mizara ny zavatra niainany, ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao. Ny olombelona ny fifandraisana be dia be ny foto-kevitra sy afa-po isan-karazany.
Ny tanjona dia ny fifandraisana dia inona ny zava-manan’aina miseho, io karazana asa. Amin’ny biby, dia mety ho, ohatra, nampitandrina mikasika ny loza.
Ary raha biby manana ny tanjona ny fifandraisana matetika no mifandray amin’ny fahafaham-po ny biolojika ilaina, ny olona izy ireo dia midika hoe ny fivoriana maro isan-karazany ny zavatra ilaina: ara-tsosialy, ara-kolontsaina, ny ara, ny famoronana, ny hatsarana, ny zavatra ilainy ara-tsaina ny fitomboana sy ny fampandrosoana ara-pitondrantena, sns.
Ny fifandraisana dia amin’ny encoding, fampitana,
fanodinana sy decoding-baovao azo avy any amin’ny fifandraisana dingana. Vaovao azo nampitaina mivantana amin’ny fifandraisana ara-batana, toy azo tsapai-tanana an’ireo hifandray ny tanana; dia afaka mampita sy mahafantatra teny lavidavitra ny alalan ny saina, ohatra, mijery olona iray hafa ny hetsika na mihaino ny vokatra feo famantarana. Ankoatra ireo rehetra ny tahirin-kevitra avy amin’ny zavaboary fomba fampitana ny fampahalalana ao amin’ny olombelona, misy hafa, noforonina — teny, ny haisoratra (andinin-teny, sary, kisary, sns.), koa toy ny isan-karazany dia ara-teknika, fitaovana fandraisam-peo, ny fampitana sy ny fitehirizana ny vaovao.
Ny fifandraisana am-bava sy ny fihetsika mitory fitiavana.
Fihetsika mitory fitiavana dia fifandraisana tsy misy mampiasa ny fiteny dia midika hoe, izany hoe amin’ny alalan’ny endrika sy fihetsika; ny vokatr’izany dia azo tsapai-tanana an’ireo, maso, sofina, ary tsy azo ihodivirana ny sary nandray avy amin’ny hafa ny tsirairay.
Am-bava ny fifandraisana miseho amin’ny teny rehetra.
Tena tsy am-bava ny teny ny fifandraisana eo amin’ny olombelona no voajanahary ao amintsika; amin’ny alalan’ny fampiasana azy, ny olona mitady ny fifandraisana eo amin’ny sehatra ara-pihetseham-po, tsy ny tsara fanahy, fa koa amin’ny zava-manan’aina hafa. Maro ny ambony biby (e.g, rajako, ny alika, ny dauphin) ary koa ny olona, ny fahaiza-tsy am-bava ny fifandraisana amin’ny ny hatsaram-panahy.
Izany dia mihoatra lavitra ny endri-javatra noho ny tsy am-bava.
Asa fifandraisana araka ny fanasokajiana ny L. Karpenko, dia toy izao manaraka izao:
contact — ny fifandraisana eo amin’ny mpiara-miasa ao amin’ny fifanakalozan-kevitra, fahavononana ny hanaiky sy hamindra vaovao;
ny vaovao — ny fahazoana ny vaovao;
fepetra — tairina asa mpiara-miasa, fifandraisana, ka mitarika azy hanao ny zavatra sasany;
fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientana ifampizarana fironana sy ny fandrindrana ny fiaraha-mientana;
ny fahatakarana — ampy fomba fijery ny hevitry ny hafatra, ny fahatakarana ny mpiara-miasa samy hafa;
ny fifanakalozana ny fihetseham-po — ny fientanentanana mpiara-miasa ilaina ny fihetseham-po fihetseham-pony;
ny fanorenana ny fifandraisana — fanentanana ny toerana eo amin’ny rafi-ny anjara toerana sy ny sata, ny raharaham-barotra, ary hafa ny fifandraisana eo amin’ny fiaraha-monina;
ny hery — ny fiovan ny toetry ny fifandraisana amin’ny mpiara-miasa — ny fitondran-tena, ny hevitra, ny heviny, ny vahaolana sy ny zavatra hafa.
Ao amin’ny firafitry ny fifandraisana misy telo mifamatotra tonta:
) ny fifandraisana — ny fifanakalozam-baovao eo amin’ny fifandraisana amin’ny olona;
) ny fifandraisana — ny fifandraisana eo amin’ny fifandraisana amin’ny olona;
) perceptual — ny fomba fijery ny mpiara-miombon’antoka sy ny fametrahana ao amin’ny fototra izany ny fiaraha-mientana ifampizarana fahatakarana.
Rehefa miresaka momba ny fifandraisana eo amin’ny fifandraisana, voalohany indrindra, tsy maintsy ao an-tsaina fa eo am-panaovana ny fifandraisana ny olona fifanakalozana eo anivon ny tenany fanehoana isan-karazany, hevitra, zavatra mahaliana, ireo fihetseham-pony, sns. Na izany aza, eo amin’ny fifandraisana dingana tsy fotsiny ny hetsika vaovao ao amin’ny cybernetic fitaovana, ary ny mpanao fifanakalozana. Ny tena mampiavaka ny olona eo am-panaovana ny fifanakalozam-baovao dia afaka mitaona ny hafa.
Ny fifandraisana dingana teraka ny fototry ny sasany mpiray asa, sy ny fifanakalozana fahalalana, hevitra, ireo fihetseham-pony, sns.
presupposes fa toy izany asa dia naorina
Amin’ny»psychology»misy karazany roa ny fifandraisana: ny fiaraha-miasa (ny fiaraha-miasa) sy ny fifaninanana (fifandirana).
Noho izany, ny fifandraisana dia misy dingana ny fifandraisana eo amin’ny olona ao amin’ny mazava ho azy fa izay mipoitra, dia miseho sy miendrika amin’ny fifandraisana amin’ny hafa ny fifandraisana. Fifandraisana mahakasika ny fifanakalozana ny eritreritra, fihetseham-po sy ny zavatra niainany. Eo am-panaovana ny fifandraisana amin’ny hafa ny fifandraisana ny olona fahatsiarovan-tena na ny olana misy ankehitriny mahakasika ny toe-tsaina, ny fihetseham-po, eritreritra sy ny fihetsika tsirairay. Asa fifandraisana dia tena samihafa, izany dia fanapahan-kevitra ny toe-javatra ho an’ny fananganana ny olona tsirairay ho toy ny olona, hametraka tanjona manokana sy manome fahafaham-po ny sasany ny zavatra ilaina. Ny fifandraisana dia ny anaty rafitra ny mpiray asa ny olona, ary dia zava-dehibe ny loharanom-baovao
← Rehetra ny voka-mitanjaka tia Mampiaraka ny akaiky - online YOUTV
Tsy misy fisoratana anarana Mampiaraka →